အင်ဂျင်နီယာလက်စွဲ Google SketchUp Pro 2014 with Crack ~ မိုးညိုသား
အင်ဂျင်နီယာလက်စွဲ Google SketchUp Pro 2014 with Crack
အဆောက်အဦးဒီဇိုင်း ရေးဆွဲခြင်း၊ အဆောက်အဦးတည်ဆောက်ခြင်း ၊ အင်ဂျင်နီယာ ၊
အိမ်တွင်းအလှဆင်ခြင်း ၊ မီးဆိုင်း အလှဆင်ခြင်း၊ မီးဖိုချောင် နဲ့ ရေချိုးခန်း ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း ၊
မြို့ပြဒီဇိုင်း ရေးဆွဲခြင်း၊ ဂိမ်း ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း၊ စင်မြင့်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း နဲ့ အခြားသောလုပ်ငန်းများမှ
Professional များစွာ ဟာ SketchUp Pro ကို နေ့စဉ် အသုံးပြုနေကြပါတယ်။
ဈေးနှုန်း ကြီးမြင့်တဲ့ CAD Software တွေ နေရာမှာ အစားထိုးဖို့ Google က
DOWNLOAD ( 108 MB )
SketchUp Pro can accurately predict where shadows will fall, given any time, date and location on earth. It can show you exactly what youâ€™ll see from anywhere in your model. It will precisely calculate the area of any surface or material, or the volume of any enclosed 3D shape. It lets you add attributes to objects, and can spit out lists and reports with deliciously useful data.
In about two minutes, you can chooseasection of the world to bring into your SketchUp Pro model—up toasquare kilometer atatime. For free, youâ€™ll get aerial imagery,a3D terrain model and lat-long data to produce accurate shadow studies. From there, you can import pre-modeled buildings for site context and use Google Maps Street View imagery to model anything else you need.